Author Topic: Su'aal: Maxay Faa'iidadda Caafimaad Ee Geedka Koostadu? (Read 45309 times)
« on: February 11, 2016, 09:01:45 PM »
Waa Maxay Faa'iidadda Caafimaad Ee Geedka Koostadu?
Geedkani waa geed aad uu ugu soo badanaaya dhawaanahan deegaanadda somalidu degto.
Hadaba Dr. Waa Maxay Faa'iidadda Caafimaad Ee Geedka Koostadu? Luuqadda English-kase maxaa lagu idhaahdaa.
Ma la siin karaa ilmaha markuu gaadho 6 bil jir?
Re: Su'aal: Maxay Faa'iidadda Caafimaad Ee Geedka Koostadu?
« Reply #1 on: February 15, 2016, 08:32:14 PM »
Waa maxay Koosto?
Koostadu waa cagaar la karsado oo cunno ahaan loo cuno, waxaa afka english-ka lagu dhahaa "Spinach", waxaa la rumeysan yahay in asalkeedu ay ka soo jeedo dalka Iran.
Maxay koostadu ka kooban tahay nafaqo ahaan?
Waxaa ku yar dufanka iyo kolestaroolka.
Waa qudaar kulansatay nafaqo kala duwan oo jirka qeybihiisa kala duwan wax u tarto.
Waxaa kaloo ku badan maadada jirka sunta ka saarto ee "Antioxidants", waxaa kaloo ku jiro maadada "Folate" taasoo la aamisan yahay in ay caafimaad u leedahay wadnaha iyo xididada.
Maadada magnesium-ka ee ku jirto cagaarta koostada waxay ka qeyb qaadataa kontaroolista cadaadiska dhiigga "blood pressure".
Diraasad la sameeyay dhawaantaan waxaa lagu soo daabacay in koostada ay kobciso xasuusta, shaqada maskaxda iyo foojignaanta.
Koostadu waxay u roontahay dheefshiidka, waxay ka hortagtaa calool fadhiga, waxay kaloo u roontahay dadka qaba gaaska iyo ulcer-ka.
Waa in koostada lagu uumiyaa biyo ee lama karkariyo, haddii la karkariyo waxaa ka dhinta nafaqada ay xambaarsan tahay, markii la uumiyo, dheecaanka ay dhashane lama daadiyo oo koostada ayaa suugo loo dhigtaa, si aysan kuu dhaafin nafaqooyinka ay xambaarsan tahay.
Ka fogow isticmaalka koostada gasacaysan ama la soo warshadeeyay, haddii aad heli karto iyadoo fresh ah, taas ayaa nafaqo badan, kana fog halista daawooyinka iyo sunta lagu buufiyo beeraha ama daawooyinka lagu xifdiyo cunnada oo warshadaha ay ku soo daraan.
Waxaa caruurta la siin karaa koostada markii ay 10 bilood gaaraan sida ay ku taliyaan dhakhaatiirta caruurta.
Views: 49556 May 22, 2009, 01:41:01 PM
Views: 50035 February 05, 2008, 07:56:57 AM
Views: 45974 September 01, 2009, 02:23:15 PM
Views: 31140 May 06, 2018, 01:17:25 PM